kudzidziswa » Apps » Matambudziko ne Instagram? Pano tinokuratidza mhinduro
Instagram yakagadzirwa muna 2010 naSpanish Mike Krueger neshamwari yake yekuAmerica Kevin Systrom. Parizvino, iyo social network iri budiriro pasi rese uye yatova nevanopfuura 300 miriyoni vashandisi vanoshanda.
Muchikamu chino, tichazopa matambudziko akajairika e Instagram uye mhinduro dzayo dzakasiyana. Tarisa gwara redu rakazara kuburikidza nechinyorwa pazasi.
Nekuda kwedambudziko iri, isu takagadzirira yakasarudzika tutori. Svika nekudzvanya pano.
Nokusingaperi, Instagram chengeta kopi yemufananidzo wega wega kana vhidhiyo yakaburitswa pane yako mbiri zvakananga muiyo Android mafoto gallery. Kana iyo application isiri kuchengetedza makopi pamudziyo, zvichave zvakakodzera kuenda kune Instagram marongero uye kugonesa mvumo yekuchengetedza mifananidzo nemavhidhiyo.
Recuerda, que kuchengetedza kwemukati kunokanganiswa kana ukasarudza kuchengeta makopi ese pamudziyo.
Tevedza nzira: Instagram Settings -> Zvirongwa -> Sevha mapikicha epakutanga uye Sevha mavhidhiyo mushure mekutumira. Activate zvose zvingasarudzwa. Kana nyaya ikaramba iripo, tangazve app yemultitasking uye mhanyisa maitiro zvakare.
Ini handikwanise kudzima chimiro changu pa Instagram
Vazhinji vashandisi havana sarudzo yekubuda mu Instagram profiles zvakananga kuburikidza neapp. Iyo "delete account" sarudzo haigone kuwanikwa kuburikidza nenharembozha, uye inongowanikwa pawebhu vhezheni.
Zvakakosha kuyeuka kuti sarudzo inowanikwa pawebhusaiti ye Instagram inodzima account kwechinguva uye kwete zvinobudirira. Kuti uite izvi, enda kukero instagram.com uye pinda neako zita rekushandisa uye password. Kana wapinda, tinya pazita rako padivi pe "kubuda" sarudzo, uye sarudza bhatani re "edit profile".
Mune iyo "edit profil" sarudzo, tsvaga tsananguro pakona yezasi yekurudyi kuti "kudzima account yangu kwenguva pfupi" uye ruramisa chikonzero chekuregererwa pachiratidziro chinotevera. Iyo mbiri icharamba ichishanda kwemazuva makumi mapfumbamwe, uye e-mail inotumirwa kumushandisi mushure mezuva iro inoyambira nezve kudzima kunoshanda kweakaundi.
Kukanganisa pakugovana mafoto nemamwe masocial network
Zvinogoneka kugovera mifananidzo yakaburitswa pa Instagram pane mamwe masocial network, akadai seFacebook ne Twitter. Zvakadaro, kukanganisa kusingazivikanwe kunodzima kugovera inotsanangurwa nemushandisi uye haitambi zvirimo panguva imwe chete mune mamwe maakaundi akabatana. Tsvaga pazasi nzira yekugadzirisa dambudziko iri:
PaFacebook: Enda kune yako account marongero (museve uri padyo nekiyi icon pakona yepamusoro kurudyi), tsvaga iyo "maapplication" menyu uye sarudza iyo "x" inoonekwa padivi pe Instagram icon. Mushure mesarudzo iyi, kupinda kwe Instagram paFacebook kuchave kusina mvumo.
Pa Twitter: tinya pamufananidzo wako uye sarudza iyo "setting" sarudzo. Chidzitiro chitsva chichaonekwa uye iwe unofanirwa kudzvanya "maapplication", tsvaga Instagram uye tinya pa "revoke access". Mushure mesarudzo iyi, kupinda kwe Instagram ku Twitter kuchave kusina mvumo.
Dzokera ku Instagram, enda ku "Settings" yeakaunti yako uye sarudza sarudzo "Yakabatanidzwa maakaundi". Dzvanya paFacebook kana Twitter icon uye upe mukana wekugovera kugovera zvakare nekuratidza data rako rekupinda.
Matambudziko ekupinda nekuda kwekusatevedzera nguva dzesevhisi
Matemu ebasa haawanzo kuverengwa nevashandisi, asi mune dzimwe nguva kutyora kwemamwe ma clause kunokonzeresa kukanzura account nekutyora mitemo nemamiriro ebasa.
Naizvozvo, kana watarisana nematambudziko ekupinda, sarudza "Wakakanganwa?" uye gadzirisa password yako yekuwana.
Pakubviswa kwezvinhu zvisina kufanira, Instagram ichapindura neotomatiki e-mail inoratidza nguva yekusashanda kweiyo mbiri kana, mune zvakakomba zviitiko, iyo yakazara deactivation yeakaunti.
Zvakakosha kuyeuka kuti mushandisi haazokwanisi kupinda ne-e-mail imwechete kana zita rekushandisa kana achidzingwa nekutyora mitemo yebasa.
Instagram haigadzirise kune yazvino vhezheni
Iyo vhezheni ye Instagram inosiyana zvichienderana nechishandiso chimwe nechimwe, uye izvi zvinokanganisa huwandu hwezviwanikwa zvinowanikwa kune wese mushandisi.
Vamwe vashandisi vangasagashira mafirita matsva kana zviwanikwa zvekugadzirisa mufananidzo nekuda kweiyo Android vhezheni iripo pachigadzirwa.
Kune akati wandei mawebhusaiti anopa iyo APK yekushandisa yekumisikidza, sezvazvakaita neAPK Mirror. Rangarira kuti kuita kwechishandiso kunogona kukanganiswa mune dzimwe nguva, mukuwedzera kune chokwadi chekuti kuisirwa kuri panjodzi yemushandisi.
Rangarira kutarisa mu Play Store kana iyo Instagram yakaiswa pachishandiso chako ichimhanya pane yazvino vhezheni.
► Maitiro ekudzima account pa Instagram
► Maitiro ekugadzira IGTV chiteshi pa Instagram
Mifananidzo yakatsikiswa neshongedzo yakaderera
Iwe unogona kugadzirisa pachako kunaka kwemifananidzo yako yakaburitswa zvakananga ne Instagram, kudzivirira kugadziriswa kwemifananidzo yakaderera.
Kuti uite izvi, enda kune Instagram zvigadziriso uye sarudza "Yepamberi maficha" uye "Shandisa emhando yepamusoro kugadzirisa mufananidzo", dzokera uye uvhare multitasking application pane chako kifaa.
Mifananidzo inotevera ichagadziriswa nemhando yepamusoro, zvisinei, mobile internet kushandiswa zvichava zvikuru. Kana iwe usingafarire kutumira mifananidzo ine yakanaka resolution, dzima chimiro ichi.
Mawebhusaiti ekudhawunirodha zvirongwa uye maapplication emahara
5 zvikonzero zvekutenga Honda City hatch
Youtube Premium mhuri chirongwa: inoshanda sei uye kuti yakawanda sei
Maitiro ekutumira nzvimbo yangu kuburikidza neWhatsApp
UmoBix: chirongwa chekudzora kwevabereki cheIOS uye Android
Nzira yekudzosera sei WhatsApp kana ndakarasa SIM kadhi rangu?